किआओकी ग्लासले १२ th वें क्यान्टन फेयरमा भाग लियो
१२ th औं चीन आयात र निर्यात मेला अप्रिल १th, २०२१ मा खोलियो। कियौकी ग्लास, ग्लासवेयरको निर्माताको रूपमा, उत्पादहरूमा चश्मा, चिया सेट, कफी सेट, वाइन सेट, गिलास हस्तशिल्पहरू आदि शामिल छन्। हामी तपाईलाई भाग्यशाली छौं धेरै प्रदर्शनकर्ताहरु मध्ये एक हुन तपाईलाई लोकप्रिय गिलास पी को प्रदर्शन ल्याउनका लागि ...
कहाँ एक गिलासवेयर निर्माता पाउन?
शीज़ीयाजुआंग कियओकी ग्लास उत्पाद कं, लिमिटेड शीजायाजुआang शहर, चीनको हेबै प्रान्तमा अवस्थित। हामी एक पेशेवर निर्यात कम्पनी हो जसको आफ्नै कारखाना छ, र निर्यात लेनदेनको जिम्मामा एक पेशेवर टीम छ। हामी अनुकूलन अर्डर स्वीकार्न सक्छौं र तपाईंको डिजाइन लोगो र रंग बी को रूपमा उत्पादन गर्न सक्दछौं ...
गिलास तेल औषधालय - भान्छामा राम्रो सहयोगी
कसरी आफ्नो जीवन सजिलो बनाउन? हाम्रो उच्च बोरोसिलिकेट गिलास तेल वितरक स्वास्थ्य लाभ नियन्त्रण गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। यो बोतल हातले बनेको छ। उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास कच्चा माल। सिफारिस गर्नुहोस्!
२०-०8-२०१ admin मा प्रशासक द्वारा
१. छनौट सामग्री: उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादनहरूको आधारमा बिभिन्न आकार, मोटाई र व्यास छनौट गर्न। र त्यहाँ पारदर्शी, एम्बर, निलो, पहेंलो, खैरो, गुलाबी, कालो, सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने कर्नलको रंगहरू छन् ...
के यो उच्च बोरोसिलिकेट गिलास वा साधारण गिलासमा पानी पिउन राम्रो छ?
यसको जन्म पछि, बोरोसिलिकेट गिलास शिक्षण को लागी मानिसहरु लाई मन पराइएको छ। यो उच्च पारदर्शिता, घर्षण प्रतिरोध, चिकनी सतह, सजिलो सफाई, र स्वास्थ्यको साथ गृह जीवनको लागि एक आवश्यकता हो। यद्यपि धेरै प्रश्नहरू चुपचाप खडा भएका छन्, "उच्च बी ...
उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास के हो
उच्च बोरोसिलिकेट ग्लास, यो एक प्रकारको कम मुद्रास्फीति, उच्च तापमान प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उच्च कठोरता, उच्च प्रकाश ट्रान्समिटन्स र उच्च रासायनिक स्थिरता विशेष गिलास सामग्रीको तुलनामा सामान्य गिलास, गैर विषैले साइड इफेक्टहरू, यसको यांत्रिक गुणहरू, टी। ..
न। 2०२, एकाई २, भवन ११, चरण २, Aobei-Gongyuan, चांगg जिल्ला, शीजियाजुआang, हेबै, चीन